महिला च्याम्पियनसिपः उद्घाटन खेलमा भुटानमाथि नेपाल ३–० ले विजयी - Everest Dainik - News from Nepal
महिला च्याम्पियनसिपः उद्घाटन खेलमा भुटानमाथि नेपाल ३–० ले विजयी
काठमाडौं, फागुन २८ । साफ महिला च्याम्पियनसिप २०१९ को उद्घाटन खेलमा भुटानविरुद्ध नेपाल ३–० ले विजयी भएको छ । नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारी, मञ्जलीकुमारी योन्जन र निरु थापाले गोल गर्न सफल भइन् । नेपालले पहिलो हाफमा २ र दोस्रो आफको ५४औं मिनेटमा १ गोल गर्न सक्यो ।
याे पनि पढ्नुस भुटानले गुमायो ४ ओभरमा ४ विकेट, सन्दीपलाई दोस्रो सफलता !
खेलको १३ औं मिनेटमा मञ्जलीको गोलमा अग्रता लिएको नेपालका लागि १६औं मिनेटमा सावित्राले गोल थपिन् । यो सँगै सावित्राले २३औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल पूरा गरिन् । खेलको ५५ औं मिनेटमा कप्तान निरु थापाले गोल गर्दै टीमलाई फराकिलो जित दिलाइन्। उनले सावित्राको हेड बललाई गोलमा परिणत गरेकी हुन् ।
याे पनि पढ्नुस पहिलो ओभरमै भुटानलाई दोस्रो झड्का, ललितले लिए विकेट !
खेल विराटनगरस्थित शहिद रंगशालामा दिउँसो ३ बजेदेखि शुरु भएको हो । सुरुका तीन संस्करणमा फाइनल खेलेको नेपाल यो पटक उपाधिको दाबेदार मानिएको छ ।
ट्याग्स: Nepal Vs Bhutan